जान्नुहोस् अमला खानुका फाइदाहरु ! पुरा पढेर शेयर गर्नुहोला « Onlinetvnepal.com
जान्नुहोस् अमला खानुका फाइदाहरु ! पुरा पढेर शेयर गर्नुहोला
Published :5May, 2019 10:47 am
अमला अति स्वस्थकर फल हो । अमला खाँदा अमिलो र टर्रो भए पनि खाएको एकैछिनमा मुखमा मिठो स्वाद उत्पन्न हुन्छ । अमला एक बहुगुणकारी फल हो । गर्मि मौससमा धेरै रसिलो फल हो अमला । रसिलो संगै यसले स्वास्थमा धेरै फाईदा पुर्याउछ । अमलाको फल खादा मात्र होइन यसको छहारीमा बसेर खादा समेत स्वास्थमा धेरै फाईदा पुग्छ ।
६. अमलाले रगतमा चिनीको नियन्त्रण गर्छ । चिकित्सकले समेत मधुमेह रोगका बिरामीलाई अमला खान सल्लाह दिने गर्छन् । अमलालाई मुरब्बा, जुस, अचार जे बनाएर पनि खान सकिन्छ ।यसले मेटाबोलिज्म बढाएर शरीरलाई तागत दिन्छ । यसमा फाइबर हुन्छ, जसले पाचन प्रणालीलाई मजबुत बनाउने गर्छ । अमला खाँदा कब्जियत, अपच, पखालाजस्ता समस्या समाधान गर्छ ।